आकाशवाणी (Aakashwani): 'नेगेटिव थिन्किङ'को परिणाम !
- योगेश कुमार खपाङगी
साइकल सिक्दा नलढ्ने मान्छे को होला ? कसै-कसैले त मान्छे समेत ठोकेका होलान् । मैले पनि ठोकेको छु । त्यस्तो किन हुन्छ ? जुन कुरा हामीले चाहेका थिएनौं । तर त्यही कुरा किन हुनुपरेको होला ? मेरो बिचारमा 'नेगेटिव थिन्किङ'को कारण हो । हामी कुनै कुरा 'कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ' भन्दा पनि त्यो कुरालाई 'नराम्रो हुनबाट कसरी बचाउने' भन्ने तिर लाग्छौं । त्यसै कारण हामीले चलाएको साइकल-मोटरसाइकलले मान्छे, पशु वा बिजुलिको पोल ठोक्छ ।
हामी कुनै काम शुरु गर्नुपूर्व नै भगवान गणेशको पुजा गर्छौ; ता कि काम शुरु गरेपछी नबिग्रियोस्, बिघ्नबाधा नआवोस् भनेर । तर यदाकदा मात्र हामीले थालेको काम सफल हुन्छ । किन ? उत्तर हो -'नेगेटिव थिन्किङ'! हामीलाई आफुमाथी नै पट्टकै भरोसा छैन, झन् अरुमाथी त हुने कुरै भएन । हामीलाई त कथित देवता माथी मात्र भरोसा छ । अनी देवता खुशी पार्न पट्टी मात्र ध्यान छ हाम्रो ।
काम गर्नेको इज्जत छैन हाम्रोमा । स्वदेश वा बिदेशमा मिहिनेत-मजदुरी गर्नेलाई-'भाँडा माझ्नेहरु, कुखुरा काट्नेहरु, फोहोर सोर्नेहरु, चिहान खन्नेहरु, लेबरहरु, खातेहरु' भनेर हियाएर बोल्छौ । तर रामनामी गेरुवस्त्र लगाउने वाक्पटुहरुलाई चैँ 'श्री १०८ गुरु' भनेर साष्टाङगदन्डवत्, मान-सम्मान गर्छौ हामी नेपाली । अनी कसरी बन्छ त हाम्रो देश ? हाम्रो सामाजिक ढाँचा देखेर पनि दिक्क लागेर आउँछ मलाई त !▪